MOETHIHAAUNG: နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထပ်ပြော
နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထပ်ပြော
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဇနီးကို လာအိုနိုင်ငံက နှုတ်ဆက်နေစဉ်၊ ဓာတ်ပုံ- ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တပ်မတော်ဟာ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေ ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ရှေ့ကိုသာ ချီတက်လျှောက်လှမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒီအနေအထား ကနေ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လာအိုနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က အခုလ ၁၄ ရက်နေ့က လာအိုသမ္မတ Mr. Choummaly Sayasone နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများပြောဆိုခဲ့ကြရာမှာ အထက်ပါ အတိုင်း ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ စစ်တပ်အာဘော် မြဝတီ အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာမှာ ၁၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့အတူ တပ်မတော်ဟာ အခုထက်ပိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် အစွမ်းးကုန်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေသလို မကြာခင်အချိန်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားနေပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
''မိမိတို့အခိုင်အမာ ပြောကြားလိုသည်မှာ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်
ရှေ့သို့သာ ချီတက် လျှောက် လှမ်းမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေမှ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မှာ မဟုတ်ကြောင်း'' ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတခုဟာ ဘယ်လိုစနစ်ကိုပဲ ကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်မှုတွေ ချုပ်ငြိမ်းမှ အဲ့ဒီ့နိုင်ငံ တိုးတက်မှာ ဖြစ်သလို နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ တပ်မတော်တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်းလည်း ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံစဉ်မှာ လာအိုသမ္မတ Mr. Choummaly Sayasone က ''မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှုနှင့် စည်းလုံး ညီညွတ် မှုကို လက်တွေ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီးနှင့် တပ်မတော်
ခေါင်းဆောင်များ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိ အောင် ကြိုးပမ်း အကောင်အထည် ဖော်မှုများသည်
အောင်မြင် လိမ့်မည်ဟု မိမိယုံကြည် မိကြောင်း'' နှုတ်ခွန်းဆက် စကားမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တယ် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခရီးစဉ်မှာ လာအိုနိုင်ငံသမ္မတ၊ လာအို တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် Major General Suvone Leoungbounmy တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တရားဝင် ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ တရားမဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု၊ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၁၆ ရက်နေ့မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေး ခရီးဆက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့အတူ တပ်မတော် ဟာ အခုထက်ပိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် အစွမ်းးကုန်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေကြောင်း လာအိုနိုင်ငံမှာ
ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး H.E.Prof.Dr. Purnomo Yusgiantoro နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာတော့ ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များကို "သောင်းကျန်းသူ" တွေအဖြစ် သုံးနှုန်းပြောဆိုကြောင်း သိရသလို အဲဒီအသုံးအနှုန်းအတိုင်း ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မှာ လည်း ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ပါတီစနစ်ကျင့်သုံးနေမှုကို ပြည်သူလူထုက ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ပါတီစုံ စနစ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း၊ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အန္တရာယ်တွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင် လာရပြီး တည်ဆဲ အစိုးရက ဘယ်လိုမှ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် တပ်မတော်က မလွှဲမရှောင်သာ တာဝန် ယူခဲ့ရကြောင်း၊ ပါတီစုံ စနစ်ကူးပြောင်းရေးအတွက် တပ်မတော်က စနစ်တကျ ကူးပြောင်းပေးခဲ့ပြီး အဆင့်ဆင့် တိုးတက်အောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွယ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြော ဆို ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကမှ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး ၃ နှစ်သက်တမ်းသာ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးသလို ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းမှု ချုပ်ငြိမ်းရေး အတွက် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က စိတ်ရှည် သီးခံပြီး အောင်မြင်စေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထောက်အကူ ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ခရီးစဉ်မှာတော့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး H.E.Prof.Dr. Purnomo Yusgiantoro၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Gen. Dr.Moeldoko တို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်တွေအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မြဲရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်ရေး စတာတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကို "သောင်းကျန်းသူ" အဖြစ်နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေ က ဖော်ပြထားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် က အဲ့ဒီ့ အချက်ဟာ စိစစ်မှု အားနည်းပြီး ဘာသာပြန်ချွတ်ချော်မှုကြောင့် မှားယွင်းသုံးနှုန်းမိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် The Voice Weekly ဂျာနယ်ကို ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကြူကြူလှ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်သန်းထွဋ်၊ ဗိုလ်ချုပ် မြထွန်းဦး၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ် တင်အောင်စန်း၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ် လွင်ဦး၊ နေပြည်တော် တိုင်းစစ် ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အေးနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ လိုက်ပါ သွားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ လာအို၊ အင်ဒိုနီးရှား ခရီးစဉ်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဒီခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မေလမှာကျင်းပမယ့် အာစီယံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး အစည်း အဝေး မတိုင်မီ အတွင်း ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myo Lwin Aung at 7:24 AM